Yakatumirwa ne Tranquillus | Nov 25, 2018 | Kunyora uye kunyora unyanzvi hwokukurukura
Zvichienderana nekambani uye nehunyanzvi mamiriro, zvingaite zvakanyanya kana kushoma kukumbira zororo. Zvisinei, makambani ose anoda chikumbiro chakanyorwa chero zororo rakatorwa: saka idanho rinodiwa. Unogona kuzviitawo zvakanaka! Heano matipi mashoma.
Zvaunofanira kuita kuti ukumbire hofisi
Paunokumbira zororo neemail, zvakakosha kuti ubudise pachena zuva renguva yakatarwa, kuitira kuti pasave nekusajeka. Kana iyo nguva ichisanganisira hafu-mazuva, zvijekese kuitira kuti waunoshandira arege kumirira kudzoka kwako mangwanani paunodzoka chete masikati, semuenzaniso!
Iwe unofanirwa kuramba uchiremekedza uye uchiruramisa, hongu, uye ugare wakasununguka kuti ukurukure kana pakazopinda nguva munguva yakaoma (mukana wekutengesa telefoni, kusarudzwa kweanoshanda naye kuti atsive iwe ...).
Chii chisingafaniri kuitwa kukumbira kuenda
Usape pfungwa yekumisikidza iro zuva: yeuka kuti iyi kunyoresa siya, iwe unofanirwa kushanda kusvikira iwe uine kuvimbiswa kwepamusoro wako.
Imwe gomba: gadzira email ine mutsara mumwe chete uchizivisa chete nguva yezororo raunoda. Kusiya kunofanirwa kupembedzwa zvishoma, kunyanya kana iri zororo rakakosha senge zororo rekuzvara kana kurwara.
Heano mufananidzo we email kuti uite chikumbiro chako chekusiya nenzira yakakodzera, kutora muenzaniso webasa mukutaurirana.
Chinyorwa: Chikumbiro chezororo rakabhadharwa
Takawana [nhamba yemazuva] okubhadhara zororo kune gore [gore rinotaridzirwa], ndinoda kutora [nhamba yemazuva] yekusiya pane nguva kubvira [zuva] kusvika [zuva]. Mukugadzirira kusakosha uku, ndicharonga matanho ekukurukurirana akarongwa mwedzi we [mwedzi] kuti urambe uchifamba zvakanaka.
Ini ndinokukumbira chibvumirano chako chekusavapo kwako uye unokumbira nomoyo wose kuti unodzorera kwako kubvumwa kwakanyorwa.
Imeyiri template yekukumbira kweshoko Zvita 9th, 2021Tranquillus
pashureEmail Template yekudaidzira
zvinoteveraEmail template kururamisa kusavapo
Siyanisa email yehunyanzvi kubva mutsamba